Glọ Ọrụ Ikuku 5G | China 5G Ndị na-emepụta waya, ndị na-eweta ngwaahịa
25Gb / s SFP28 LR 1310nm 10km DDM DFB LC transceiver optical
Ndị transceivers SFP28 bụ arụmọrụ dị elu, modulu dị ọnụ ala na-akwado ọnụego data nke 25Gbps na oke njikọ ogologo nke 10km na SMF. Ezubere ya maka 25GBASE-LR Ethernet na 25.78125 Gb / s otu uzo 100GE LR4. Ha kwenyere na SFF-8402 na SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 na IEEE 802.3by 25GBASE-LR, FCC 47 CFR Part 15, Class B, Telcordia GR-468-CORE.
25Gb / s SFP28 SR 850nm 100m DDM VCSEL LC transceiver optical
SFP28 transceiver bu ihe nlekota oru nyocha uzo di iche iche na-agbanwe 25Gbit / s serial PECL ma obu ihe omuma eletriki nke CML n'ime onodu ihe nlere anya nke kwekọrọ na 25GBASE-SR. Ezubere ya maka netwọkụ nchekwa mpaghara ọsọ ọsọ, ụyọkọ kọmpụta jikọọ, Kọmputa ọsọ ọsọ ọsọ na Njikọ Inter Rack. Ha kwekọrọ na SFF-8431, SFF-8432 na IEEE 802.3ae 25GBASE-LR.
100Gb / s QSFP28 CWDM4 1310nm 2km DDM DFB transceiver optical
100Gb / s QSFP28 CWDM4 bụ ọwa anọ, pluggable, transpeiver optical optical na ezubere maka ngwa 100G CWDM na FEC, Datacenter na networking network na njikọ anya ndị ọzọ. Ha kwenyere na SFF-8636 Nkọwapụta, IEEE 802.3ba 100GBASE-CLR4 / CWDM4 na Telcordia GR-468-CORE. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
100Gb / s QSFP28 ER4 bu uzo ano, ihe ntanye, ihe ntinye anya nke ozo ma hazie ya maka 100 Gigabit Ethernet ngwa. Ha kwenyere na SFF-8665 Nkọwapụta, IEEE 802.3bm 100GBASE-ER4 na Telcordia GR-468-CORE. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
100GBASE-LR4 na 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate 1310nm 100m DDM DML & PIN LC transceiver optical
100Gb / s QSFP28 LR4 bụ ọwa anọ, nke nwere ike ịgbakwunye ya, nke a na-ahụ anya na nke a na-ahazi maka 100 Gigabit Ethernet, InfiniBand EDR, FDR, QDR. Ha kwenyere na SFF-8665 Nkọwapụta, IEEE 802.3bm 100GBASE-LR4 na Telcordia GR-468-CORE. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
100Gb / s QSFP28 SR4 850nm 100m DDM VCSEL MPO transceiver optical MPO
100Gb / s QSFP28 SR4 bụ a
anọ ọwa, pluggable, yiri ngwa anya transceiver na e mere maka 100GBASE-SR4 na 100 Gigabit Ethernet, InfiniBand EDR, FDR, ngwa QDR. Ha kwenyere na SFF-8665 Nkọwapụta, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 na Telcordia GR-468-CORE. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
100Gb / s QSFP28 SR4 850nm 100m DDM Dual Rate VCSEL MPO / MTP transceiver optical
anọ ọwa, pluggable, yiri ngwa anya transceiver na e mere maka 100 Gigabit Ethernet, Data Center, InfiniBand QDR, DDR, SDR na ngwa CPRI10. Ha kwadoro QSFP28 MSA na-ekwenye ekwenye, IEEE 802.3bm. Ndị na-ahụ maka ngwa anya na-agbaso ihe RoHS-6 chọrọ.
100Gb / s QSFP28 LR4 bụ ọwa anọ, nke nwere ike ịgbakwunye ya, nke a na-ahụ anya, nke a na-ahazi maka 100 Gigabit Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F, ngwa CPRI 10. Ha kwenyere na ụkpụrụ IEEE P802.3ba na OTU4 4I1-9D1F. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
100Gb / s QSFP28 PSM4 1310nm 10km DDM DFB transceiver optical
100Gb / s QSFP28 PSM4 bu uzo ano, ihe ntanye, ihe ntinye anya nke ozo ma hazie ya maka 100GBASE-PSM4 na 100G Ethernet, InfiniBand DDR, EDR. Ha kwenyere na SFF-8636 Nkọwapụta, IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 na Telcordia GR-468-CORE. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
100Gb / s QSFP28 PSM4 1310nm 500m DDM DFB transceiver optical
100Gb / s QSFP28 PSM4 1310nm 2km DDM DFB transceiver optical
100Gb / s QSFP28 PSM4 bu uzo ano, ihe ntanye, ihe ntinye anya nke ozo ma hazie maka 00GBASE-PSM4 na 100G Ethernet, InfiniBand DDR, ngwa EDR. Ha kwenyere na SFF-8636 Nkọwapụta, IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 na Telcordia GR-468-CORE. Ndị transceivers optical na-agbaso ihe RoHS chọrọ.
10Gb / s SFP + 1270nm / 1330nm 10km DDM DFB LC ngwa ngwa transceiver
Ezubere 10Gb / s SFP + BIDI maka iji ya na njikọ njikọ Ethernet 10GBASE-BX. Ha kwadoro SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-LR / LW, SFF-8472 na SFP + MSA, FCC 47 CFR Part 15, Class B, na Telcordia GR-468-CORE. Igwe nyocha anya na-akwado ihe RoHS chọrọ.